संसदवादी दलहरुको झगडा::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण
अचेल आमसंचार जगत वा सामाजिक सञ्जाल संसदवादीहरुका झगडा र उनले प्रदर्शन गरिरहेका नौटंकीका गाथाहरुले भरिभराउ छन् । संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा संसदवादीहरु विभाजित भएका छन् र आमजनतालाई संसदीय आहाल भित्रै कैद गने दुस्साहस गरिरहेका छन् । एकाथरिहरु मानौं संसदको पुनःस्थापना भयो भने देश स्वर्गजस्तो हुन्छ भन्ने जस्तो हुने गफ दिइरहेका छन् भने अर्काथरी चुनावले देशको कायापलट गर्छ भन्दै वर्वराइरहेका छन् । अहिले नौटंकी देखाइरहेका यिनै तत्वहरु हुन् जसले संविधान बनेपछि देश स्वर्ग वन्दछ भन्ने । आज देशको अवस्था के छ ? के यथार्थ यस्तै हो त ? आमजनताले गम्भीर भएर निष्कर्ष निकाल्ने वेला आएको छ ।
तथ्यहरु बोलिरहेका छन् देश आज गम्भीर संकटमा छ । यो संकटको कारण के हो त ? यसको मुख्यकारण संसदीय व्यवस्था र यसका ठेकेदार हुन् । देशलाई विदेशीको रणनीतिक क्रिडास्थल वनाएर देशको स्वाधीनतालाई वन्धक राख्ने अरु कोही नभएर यिनै संसदवादीहरु हुन् । देशमा अहिले जुन लुटतन्त्र चलिरहेको छ यसका मुख्य खलपात्रहरु को हुन् ? यिनै संसदवादी हुन् ।
अनि संसद पुनःस्थापना हुँदा वा चुनाव हुँदा वन्ने शासक को हुन् ? यिनै हुन् । संसदवादी डकैतहरुको धन्दै हो कथित चुनाव, विघटन आदि आदि । योक्रम उनीहरुको देश लुटने र जनतालाइ विभाजित गर्ने अनि पालैपालो शासन गर्ने प्रपञ्च मात्र हो । त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता चुनाव वा पुनःस्थापना हैन यो लुटतन्त्रलाई समाप्त पारेर साँचो अर्थमा नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्ति र देशको स्वाधिनताको रक्षा गर्ने । नेपाली जनताको जनतन्त्र स्थापना गर्ने संघर्षमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो । यो लुटतन्त्रको कुनै हिस्सामा सहभागी हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
जहाँसम्म संसदवादीहरुको प्रश्न छ यो घटनाले सरकारी पाटीका दुई घटक मध्ये एक घटकका नाइकेहरुको राजनीतिक जीवनको अन्त्य भने हुन सक्दछ । संसद पुनःस्थापना हुँदा विद्या ओलीको राजनीतिक जीवन रहँदैन त्यसैगरी चुनाव हुँदा दाहाल नेपालको राजनीतिक जीवन नरहने सम्भावना छ । अझै प्रष्टसंग भन्दा दाहालको राजनीतिक जीवनको दुःखद अवसानको खतरा बढी छ ।
किनकी राज्यसत्ता परानै भएको र पुरानो राज्यसत्ता र दाहालका बीच शत्रुता पूर्ण अन्तरविरोध रहिरहेकोले उनीहरु बदला लिने पर्खाइमा छन् भन्ने कुरा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बेकम्मा बनाउने कुराले पुष्टि गर्दछ । दाहाल अहिले सबैभन्दा कमजोर छन् । माधव नेपाल जस्तो अवसरवादीबाट उनलाई सहयोग पुग्ने कुनै सम्भावना छैन । अहिले पाटी भित्र अन्तरविरोध खडा गरेर शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुर्याउनमा माधव नेपालको मुख्य हात छ । कतै यसको पछाडि दाहाललाइ किनारा लगाउने खेल त छैन ? भन्ने प्रश्न धेरै कोणबाट उठी रहेका छन् ।